Daryeelka caruurta ee mareykanka - Amjambo Africa
Daryeelka caruurta ee mareykanka
Helitaanka tayada, daryeelka caruurta ee la awoodi karo waa dhibaato kajirta dhamaan Maine. Waalidiin badan kharashka ayaa culeys weyn ku ah dhaqaalaha qoyska. Qoysaskuna ma aha kuwa kaliya ee ay dhibaatadu saameysey – bixiyeyaasha xanaanada cunugga, shaqaalaha, iyo loo shaqeeyeyaasha Maine ayaa sidoo kale dareemaya ciriiri.
Dowladda federaalka waxay soo jeedineysaa in kharashaadka xanaanada cunuggu ay ahaato in ka yar 7% celceliska miisaaniyadda qoyska, laakiin xaqiiqda qoysaska badankood ee Maine aad ayey uga duwan yihiin. Celceliska kharashka xanaanada cunugga ee Portland waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay $ 16,381, taas oo ka sareysa kharashka waxbarashada ee kulliyadaha gobolka ee afarta sano ah.
Waxaan la fadhiisanay Katie Soucy oo ka socota Starting Strong si aan wax uga barto ikhtiyaariyada.
Sideen ku helaa daryeel bixiye?
(Xitaa kahor intaanu ilmahaagu dhalan!) Hal ilaha aan si gaar ah ugu faraxsanahay waa Khariidadda Safarka Daryeelka Carruurta ee OEO
https://www.portlandofopportunity.com/how-do-i-find-childcare) – oo lagu heli karo luqado badan. Qof walba waa inuu iska hubiyaa! Intaas waxaa sii dheer, macluumaadka xiriirka iyo qiimeynta tayada ee dhammaan bixiyeyaasha xanaanada cunugga ruqsada haysta waxaa laga heli karaa www.childcarechoices.me, oo ay weheliyaan xiriiriyeyaal waxtar leh iyo talooyin ku saabsan sida loo helo waxa ugu habboon qoyskaaga. Ugu dambeyntiina, way fiicantahay inaad jadwal u sameysato waqti aad kula kulanto agaasime ama macallin, ku dalxiiso barnaamijka oo aad wax uga barato falsafadooda daryeelka. Waa muhiim inaad dareento raaxo waalid ahaan. Ugu dambeyntiina, tixgeli inaad ku qorto magacaaga wax ka badan hal liiska sugitaanka – waxaa xaqiiqdii jira boosas la’aan xagga Maine ah.
2. Sideen ku ogaan karaa haddii aan u qalmi karo kaalmada dhaqaale?
Ogaanshaha u-qalmitaanka kaalmada maaliyadeed waxay noqon kartaa mid jahawareer leh. Barnaamijyada kaladuwan waxay leeyihiin shuruudo kala duwan. Waxaan kula talinayaa dadka inay ka bilaabaan hay’addooda HeadStart ee maxalliga ah, maxaa yeelay waxay badanaa ka caawin karaan qoysaska inay kala soocaan barnaamijyada kala duwan. Meel kale oo wanaagsan oo laga bilaabi karo waa Barnaamijka Kaabista Daryeelka Carruurta ee Gobolka Maine. Codsiyada (iyo macluumaad dheeri ah) ayaa laga heli karaa https://www.maine.gov/dhhs/ocfs/ec/occhs/step.htm.
Maxaa liiska suguhu u dheer yahay?
Liiska sugitaanku wuu dheer yahay maxaa yeelay si fudud uma haysanno boosas daryeel-carruureed oo nagu filan oo daboolaya baahida – gaar ahaan dhallaanka. In kasta oo kharash badan ku leeyahay waalidiinta, barnaamijyada daryeelka carruurtu badanaa waxay sameeyaan faa iido aad u hooseysa. Waxaan aragnay hoos udhaca tirada bixiyeyaasha ee bulshadeena sanadihii la soo dhaafay iyadoo isla mar ahaantaana aan aragnay qoysas aad u tiro badan oo leh dhammaan dadka waaweyn ee shaqaalaha. Nasiib darrose, masiibada ayaa kaliya ka sii dartay dhibaatada daryeelka carruurta iyada oo bixiyeyaal badan ay xiraan duhoos u dhaca awooda iyo kordhinta kharashyada.
. Sideen uga qaybqaadan karaa?
La’aanta daryeel carruureed tayo sare leh oo la awoodi karo waa arrin dhib badan laakiin haddii aan wada shaqeyno waxaan dhisi karnaa beel ay carruurta iyo qoysaska ka soo kala jeeda dhammaan duruufaha iyo duruufaha haysta taageerada ay u baahan yihiin si ay ula kulmaan awooddooda buuxda. Starting Strong waxay isugu yeereysaa daneeyayaasha si ay u wargeliyaan una doodaan siyaasadaha gacan ka geysanaya xallinta dhibaatadan.
Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno waalidiinta shaqadan, waxaanan bilownay martigelinta kulamada waalidiinta ee joogtada ah si aan udhigno codka waalidka iyo hogaaminta dadaalkeena. Si aad waxbadan ubarato, fadlan kafiiri boggayaga internetka kuna soo biir liistadayada boostada https://www.portlandstartingstrong.org
Helitaanka daryeel qiimo jaban oo tayo leh waa muhiim. Haddii aad ku dhibtooneysid inaad hesho daryeel bixiye carruur waad ku kalsoon tahay waadna awoodi kartaa – keligaa ma tihid. Fadlan xusuusnow inaad booqato degelkeenna si ay kaaga caawiso inaad u gudubto waqtigan cajiibka ah laakiin walaaca badan (waxaa lagu heli karaa luqado badan!)
PreviousSida carruurtaada loogala hadlo lacagta Lacagta aragtida soogalootiga
NextOk Lacag lagu keydsanayo caymiska